काठमाडौं । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मातहतका विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरूको व्यापक घुइँचो लाग्न थालेको छ । स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरी अधिकांश समय विदेश भ्रमणमा हुँदा मन्त्रालयको काम रोकिने गरेको छ । पछिल्लो दुई महिनाका बीचमा मात्र सचिव चौधरी पाँचपटक जति विदेश उडिसकेकी छन् । उनी निश्चित सरुवा तथा मालदार काम नेपाल आएको बेलामा हतारमा सदर गर्ने अनि फेरि विदेशका लागि निस्किहाल्ने गर्दा उनले धेरै काम पेन्डिङमा राख्ने गरेको बताइएको छ । यही कारण उनको आलोचना हुँदै गएको छ ।
पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सचिवको लापर्बाहीले घोषित वार्षिक कार्यक्रमहरू स्वीकृत अझै हुन सकेको छैन । त्यसो भएकाले ती मातहतका कर्मचारीहरूलाई दसैंमा तलब खानसमेत समस्या पर्ने बताइन्छ । विभिन्न तल्ला तहका र मातहत कर्मचारीलाई पठाउँदा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि सचिव चौधरी आफैँ जाने गरेकी छन् । त्यसैले, पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा ‘विदेश भ्रमण’ हेर्ने महाशाखा मात्र सधैं व्यस्त र चहलपहलमा हुने गरेको छ भने अन्य महाशाखाको चहलपहल छैन । त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ (१२औं तह) मा लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा पनि स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीले नै नियुक्तिमा अवरोध गरेको आरोप लगाइएको छ ।
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति–कार्यक्रम तथा कामबारे छलफलका गर्दै तत्काल लोकसेवामार्फत रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नसमेत सचिवलाई निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवसरहको प्रमुख विशेषज्ञ तीन पदमध्ये दुईवटा रिक्त छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूमा १२औं तहका चिकित्सकमध्येबाट जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ । हाल मन्त्रालयमा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल मात्रै १२औं तहमा छन् । १२औं तहका लागि वरिष्ठताका आधारमा डा. रोशन पोखरेल, डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. भीमसिंह तिंकरी, डा. गुणराज लोहनी, महेन्द्र श्रेष्ठ प्रमुख विशेषज्ञको दौडमा छन् । पछिल्लो समय मन्त्रालय र विभागबाट हुने सरुवामा समेत पैसाको चलखेलको हुँदै आएको आरोप लागेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बढुवा भएयतामा धेरै समस्या भएको भन्दै जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार आउने उजुरी, गुनासा, छानबिनमा कुनै सुनुवाइ नै नभएको बताइएको छ ।